ထည့်လိုသော လက်ဆောင်ပစ္စည်း - MYSTERY ZILLION
October 2008 edited August 2009 in Idea
ထည့်လိုတဲ့ လက်ဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ဒီမှာတောင်းဆိုနိုင်ပါတယ်။
ပုံလေးပါ တစ်ခါတည်း ပါရင် ပိုကောင်းတာပေါ့...
cake တော့ ထည့်ပြီးပြီ... MK ပြောထားတဲ့ ရတနာ ကိုးပါး ထည့်ပေးမယ်
လကဆောင်ပစ္စည်းတွေ member အခြင်းခြင်း ပေးလို့ရနေပြီလေ
ပုံကို insert ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ... ပြောပြပေးကြပါအုံး
ပုံတွေကို ဒီboxလေးထဲမှာ ဘယ်လိုထည့်ပါသလဲ။
အကို Saturn God ရေ....
ကျွန်တော်သိချင်တာက....Gif ဖိုင်ကို ကိုယ့်ရဲ့ Avator မှာ တင်ချင်တယ်။
what's this line means???
can anybody give meaexplaination??
i think i MUST GO home watching my star trek:101:
၇ယောက် ၈ယောက် လောက်ပို့လိုက်ရင် လက်ဆောင်တွေကထပ်ကုန်ပြီး:d
လုပ်ပေးပါ့မယ်။ မလုပ်နိုင်လို့ exiter ကို admin ပေးထားတာ။ ဟိဟိ။ exiter ရေ.. မင်းအားရင် ထည့်ပေးလိုက်ပါအုံး။ ငါ့ဆီမှာက conn က ညလူအိပ်ချိန်မှကောင်းတာ။
valentin's day နီးပြီဆိုတော့ ဒီလင့်ခ်ကပုံလေးတွေ ထည့်ပေးစေချင်ပါတယ်။
http://www.mooglitters.com/ ကပါ။ ပုံလေးတွေ အစုံပါပဲ။ animated လိုချင်သူတွေ အများဆုံးသွားကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကိုစေတန်, phpcrazy, mrdba, exiter တို့ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေထည့်ပေးပါ :D:D:D ....
ဒီလက်ဆောင်ပေးတဲ့ အစီအစဉ်က ပျက်သွားတာကြာပြီထင်တယ်နော်:39:
ကျွန်တော့် laptop လေး ကိုလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ် (ကြွားခြင်းမဟုတ်ပါ):P
Online ပေါ်မှာ ကြွက်တွေမရှိပါဘူးဗျ ..... :P:P
kna wrote: »
Reply to Thread လုပ်ရင် .... Box အပေါ်မှာ B I U , အဲဒီ Tool Bar လေးတွေ့တယ်မှလား ... အဲဒီမှာ တောင်ပုံလေးနဲ့ Insert Image ဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒါလေးနှိပ်ပြီး ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ Image Link ကိုထည့်လိုက် ....
Drag & Drop လဲရပါတယ်။
[FONT="]အကို အမ တို့ ကျတော်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိလို့[/FONT]
[FONT="]မမြင်ဖူးတဲ့ဟာလေးလားလို့ ညီတော့မမြင်ဖူးဖူး [/FONT]
[FONT="]တိုက်ဆိုင်တာလား အဲဒါကြောင့်လားမသိဘူး [/FONT]
[FONT="]ညီလဲအဲဒါမြင်တော့ အဲဒီထဲက တစ်ခုခုနှိပ်လိုက်မိတယ်ထင်တယ်[/FONT]
[FONT="]စက်ကအရမ်းလေးလားတယ် နောက်ပြီးတော့ Screen က တစ်မျီုးဖြစ်သွားတယ်[/FONT]
[FONT="]Restart ပြန်လုပ်လိုက်တော့ start bar ကို နှိပ်လို့ရပါသေးတယ်
[FONT="]ဒါပေမဲ့ Desktop ပေါ်မှာဘာမှပေါ်မလာတော့ဘူး [/FONT]
[FONT="]Virus တော့မဟုတ်ဘူးလားလို့ [/FONT]
[FONT="]အဲဒီအချိန်မှာ Task manager ခေါ်လို့ရတယ် folder option လဲမပျောက်သွားဘူး[/FONT]
[FONT="]အဲဒီတိုင်းပဲ နေနေရင်းနဲ့ တော်တော်ကြာတော့မှ [/FONT] [FONT="]Desktop ကပြောင်းသွားတယ်[/FONT]
အခုလို ..ပါ ။
ဟိုပေါ်က မမြင်ဖူးတဲ့ r-click မှာပါနေတဲ့ ဟာနဲ့ အခုလို စက်ဟန်းသွားပြီ background ပြောင်းသွားတာဆိုင်လား တိုင်ဆိုင်သွားတာလား သိချင်လို့ပါ။
[FONT="]တစ်ခုခုများ run ထားမိလို့ဖြစ်တာလား လို့ မသင်ခါဖြစ်နေသေးတယ်[/FONT]
[FONT="]နောက်တော့ ကျန်တဲ့စက်တွေပါလိုက်ကြည့်လိုက်တော့ [/FONT]
[FONT="]အဲဒီ သုံးခုက စက်တိုင်းမှာရှိနေတယ် အဲဒါဘာဖြစ်တာလဲပြောပါဦး ။[/FONT]
ဘာမှပြသနာမရှိလောက်တဲ့ error ကိုအခုလိုမေးမိတယ်ဆိုရင်ခွင့်လွတ်ကျပါခင်ဗျာ ။